Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezithandekayo ngoku zi-A220-300
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Technology • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Breeze Airways, yinqwelomoya yaseMelika eyintloko eCottonwood Heights, eUtah.
Inqwelo moya yasekwa nguDavid Neeleman, owayekhe waseka uMorris Air, WestJet, JetBlue, kunye noAzul Linhas Aereas.
IBreeze Airways ityhile into entsha I-A220-300 livery Ngelixa iqinisekisa ukuba ifikelele kwisivumelwano sokuthenga kunye ne-Airbus ye-20 ngaphezulu yenqwelomoya.
Lo myalelo ungachazwanga wama-20 uzisa incwadi ye-Breeze iyonke kwi-80 A220-300s, eyokuqala eya kuhanjiswa kwi-Q4 2021.
Umsebenzi wepeyinti omtsha wenqwelomoya wagqitywa kwiziko le-Airbus eMobile, eAlabama, eya kuthi ihambise malunga ne-A220 ngenyanga eBreeze kule minyaka mithandathu inesiqingatha izayo.
I-Breeze Airways, inqwelo moya yommandla waseMelika yathi malunga nenkampani: Kwaye, sikholelwa ekubeni kufanelekile ukuba ibe ngamava afikelelekayo kwaye ayinyani kuye wonke umntu. ”
Sisonke, sidalile Umoya womoya ™ - iteknoloji entsha yokudibanisa itekhnoloji ngobubele. Umoya opholileyo ubonelela ngenkonzo engapheliyo phakathi kweendlela ezingagcinwanga kakuhle kwi-US ngexabiso elifikelelekayo.
Ngokubhukisha ngaphandle komthungo, kungekho tshintsho okanye umrhumo wokurhoxisa kunye neempawu zokuhamba ngenqwelomoya ezithunyelwe nge-app elula kwaye elula, iBreeze yenza kube lula ukuthenga nokubhabha lula. Wamkelekile kwiBreeze, iinqwelo-moya eziMnandi kakhulu kunye nexabiso. ”
Inqwelomoya yenqwelomoya iceba ukuqala iinqwelomoya ngeenqwelo moya zeAirbus kwikota yesibini ka-2022.
Izixeko zomoya opholileyo
Ukusebenza ngokukuko kwe-A220 kuya kuxhasa iinjongo zeshishini lenqwelomoya ukubonelela ngamava amahle okuhamba, ngemali ephantsi kunye nokuguquguquka okuphezulu. Umoya opholileyo kulindeleke ukuba ubonelele ngenkonzo engapheliyo phakathi kweendlela ezingafakwanga ndawo kwi-US ngexabiso elifanelekileyo.
U-Breeze uqalise ukusebenza kweenqwelomoya ngoMeyi ka-2021. Le A220 yokuqala yinqwelomoya entsha yokuqala ezakusebenza yinqwelomoya.
I-A220 kuphela kwenjongo yenqwelomoya eyenzelwe i-100-150 yemarike yezihlalo kwaye idibanisa imeko ye-aerodynamics, izinto eziphambili kunye ne-PrW & Whitney's-PW1500G ye-injini eyenzelwe i-turbofan. Ukuxhamla kubuchwephesha betekhnoloji, i-A220 yeyona moya ithe cwaka, icocekile, kwaye uninzi lwayo luluhlobo lwe-eco kudidi lwayo.
Ifaka i-50% yokunciphisa umsindo wengxolo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 zokutsha kwepetroli ngesihlalo ngasinye xa kuthelekiswa neenqwelo moya zangaphambili, kunye nokujikeleza okungu-50% okukhutshiweyo kwe-NOx kunemigangatho yemizi-mveliso, i-A220 yinqwelomoya enkulu yokusebenza kwedolophu.
Ngaphezulu kwe-170 A220s sele ihanjisiwe kubanini bayo abalishumi eAsia, eMntla Melika, eYurophu naseAfrika, oku kungqina ukuba eli lungu losapho lakwa-Airbus liyasebenza ngeendlela ezininzi.